Isiokwu oriọna na aka mmetụta na 256 agba n'ịgwa, Aukey LT-T6 | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe anyị chọrọ oriọna maka tebụl akwa anyị, tebụl ma ọ bụ ọbụlagodi iji mepụta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'ime ime ụlọ ahụ, anyị nwere ike ịhọrọ n'ọtụtụ nhọrọ dị n'ahịa. Ihe kachasị mma na akụkụ a bụ ịnwe nhọrọ nke iji oriọna na ọnọdụ ọkụ nkịtị wee nwee ike ịhọrọ n'etiti agba dị iche na ike, oriọna Aukey LT-T6 nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka ya ọ bụrụ n’achọghị imefu nnukwu ego ma chọọ itinye ọnụ ụlọ n ’ụlọ anyị.
Akụkụ ọzọ na-adọrọ mmasị nke ọkụ Aukey a bụ na o nwere ihe mmetụ aka na ntọala nke anyị nwere ike iji mee njikọ agba niile ma ọ bụ mezie ike ya. Anyị na-adọ aka na ntị na ọ bụghị oriọna nke na-enwusi ike ma ọ ga-adọrọ mmasị maka abalị ma ọ bụ yiri ya.
Aukey nwere ihe na-adọrọ mmasị na ngwaahịa ya ma ọ bụ na nso nso a ọ na-eme nke ọma n'ihe gbasara ogo na ọnụahịa. Ọ bụ maka inweta ngwaahịa nwere ezigbo njirimara, arụmọrụ dị mma yana ọnụahịa ezi uche dị na ya, na nkenke anyị nwere ike ikwu na Aukey dị n'ihu ụdị ndị ọzọ taa na nke a.
1 Ihe ngwugwu
3 Otu Aukey si arụ ọrụ
N'echiche a, enweghị ọtụtụ ihe ịkọwa karịa oriọna tebụl n'onwe ya, akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ yana akwụkwọ ikike n'onwe ya. Ọ bụghị na anyị chọrọ karịa nke a maka ngwaahịa nwere njirimara ndị a.
Nhazi ahụ na-echetara anyị ụdị ndị ọzọ dị n'ahịa taa na na-agwakọta nke ọma aluminom na ala ya na plastic na-acha ọcha n'elu. Tinye akara ngosi ụlọ ọrụ ahụ n'ihu yana eriri roba na ala ka ọ ghara ịmịpụ n'elu ọ bụla.
Aukey nwere arọ nke 875 g na akụkụ nke 10 x 10 x 23 cm. Ọ na-agwakọta nke ọma na ụlọ ọ bụla n'ụlọ na Ikanam nwere ihe dị ka 450 lumens dị ka emeputa. Ogologo oge dị ihe dị ka awa 35.000 na ohere ọ na-enye anyị dị ọtụtụ mgbe anyị chọrọ ịhọrọ ụcha ọkụ.
Otu Aukey si arụ ọrụ
Na nke a, ọ nweghị bọtịnụ anụ ahụ ma gbanye ya ka anyị pịa aluminom. Iji jiri akpaka mode nke ahụ ga-agbanwe agba mgbe niile anyị kwesịrị pịa dara aka maka 3 sekọnd. Na ọnọdụ a, anyị ga-ahụ njikọta agba dị iche iche na nsonaazụ ọkụ dị iche iche.
Ọ bụrụ na, n'ụzọ dị iche, ihe anyị chọrọ bụ ọkụ ọcha na-ekpo ọkụ (ọ bụghị ọkụ na-acha ọcha) anyị nwere nhọrọ atọ nwere ike. Iji rụọ ọrụ ya anyị ga- pịa na ígwè site na ịme ọpịpị, n'oge ahụ ìhè Ọ ga-enwu gbaa ọcha ma nwee mmetụ abụọ ọzọ anyị ga-abawanye ike na nke kachasị, na aka nke atọ anyị ga-agbanyụ ya.
Maka ndị chọrọ hapụ otu edozi agba ọzọ na-acha ọcha, anyị ga-ahapụ na-ejide padụ mmetụ aka maka sekọnd atọ na mgbe ọ na-adịgide na agba anyị chọrọ ka anyị nwee swipe na aka, oriọna ahụ ga-edozi agba ahụ ahọrọ. Ee anyị chọrọ ịgbanwe ọzọ anyị na-swipe elu ọ ga-alaghachi na agba agba, na-enye anyị ohere ịhọrọ nke ga-adịrị anyị mma.
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke oriọna Aukey a maka ya bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọnụahịa ya karịrị akarị, oriọna a nwere n'ezie gbanwetụrụ price maka ihe ọ na-enye anyị ndien nnyịn imekeme Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.. Ọnụahịa na-adọrọ mmasị n'ezie maka ndị chọrọ imepụta ikuku dị iche n'ime ụlọ ọ bụla n'ụlọ.
Ihe eji eme mma
Ọ dakọghị na Homekit ma ọ bụ ihe yiri ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Isiokwu oriọna na aka mmetụta na 256 agba n'ịgwa, Aukey LT-T6
Afọ nke alaeze: Definitive Edition abịarute, atụmatụ na agụụ na-agụ